News Highlights: | कहाँ गए काभ्रेका यी वेपत्ता नागरिक ?
मेचीकाली : 2018-09-21 10:22:00
द्वन्द्वकालमा वेपत्ता भएका २८ जनाको अवस्था अज्ञात
काभ्रे, ५ असोज :
शशस्त्र द्वन्द्वका समयमा प्रभावित परिवारको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रदेश नम्वर ३ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा पठाईएको छ । शान्ति प्रकृया शुरु भई मुलुक नयाँ संरचनामा गएको लामो समय भईसक्दा समेत द्वन्द्वमा बेपत्ताहरुको टुङ्गो नलागेको हो ।
शशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जिल्लाबाट अझै २८ जना बेपत्ता छन् । वेपत्ता मध्ये एक जना चौरीदेउराली गाउँपालिकाकी महिला समेत छिन् । नयाँ संहिता कानुनले बेपत्ता ब्यक्तिहरुको परिभाषा गरिसकेको छ । त्यस्तो अवस्थामा द्वन्द्व सकिएको दशक नाघिसक्दा वेपत्ताकै सूचीमा राखिरहने कि नरहने ? राजनीतिक र कानुनी प्रश्नका बीच बेपत्ताको सूची पठाईएको छ । नयाँ कानुन भदौ १ गते पछि बेपत्ता हुनेहरुका लागि मात्रै हो कि ? बेपत्ताका परिवारले मृत्यु भए सरहका ब्यक्ति सरह राज्यबाट सहायता रकम लिईरहेका छन् । द्वन्द्वकै कारण जिल्लामा ८० जना घाईते÷अपाङ्ग रहेकोमा २१ जना महिला छन् । २ सय ३२ जना शहिद छन् । नमोबुद्ध नगरपालिकामा शहीदको संख्या शुन्य छ । सबै भन्दा धेरै शहीद भएको स्थानीय सरकार रोशी गाउँपालिका हो । जहाँ २८ जना शहीद भएका छन् । खानीखोला दोश्रो स्थानीय तह हो जहाँ २५ जना ब्यक्ति शहीद भएका थिए । तेमाल गाउँपालिकामा २४ जना शहीद भएका छन् भने पाँचखाल, पनौती, चौरीदेउरालीमा २३÷२३ जना शहीद भएका छन् । जिल्लामा द्वन्द्वका कारण १ सय २४ जना विस्थापीत भएका थिए । सबैभन्दा धेरै चौरीदेउराली गाउँपालिकाबाट विस्थापीत भएका छन् भने दोश्रोमा तेमाल गाउँपालिकाबाट विस्थापीत भएका छन् । चौरीदेउरालीमा २८ जना विस्थापीत भए भने तेमालमा २० जना विस्थापीत भएका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले जिल्लामा रहेका १३ वटै स्थानीय तहमा रहेका द्वन्द्व प्रभावित परिवारहरुको विवरण आईतबार प्रदेश सरकारलाई पठाएका हुन् ।
स्थानीय तह अनुसार धुलिखेल नगरपालिकामा बेपत्ता २ जना छन् भने घाईते अपाङ्ग ६ जना र शहिद ११, विस्थापित १७ जना छन् । त्यस्तै बनेपा नगरपालिकामा बेपत्ता ३, घाईते÷अपाङ्ग ४, शहीद २३ जना रहेका छन् । बनेपा नगरपालिकामा विस्थापी छैनन । पाँचखाल नगरपालिकामा बेपत्ता ४, घाईते÷अपाङ्ग ३, शहीद २३ र विस्थापित १४ जना रहेका छन् । नमोबुद्ध नगरपालिकामा बेपत्ता २, घाईते÷अपाङ्ग ३ र विस्थापित १३ जना रहेका छन् । नमोबुद्ध नगरपालिकामा शहीदको संख्या शुन्य छ । मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा बेपत्ता १, घाईते÷अपाङ्ग ५, शहीद १८ र विस्थापित ३ जना रहेका छन् । तेमाल गाउँपालिकामा बेपत्ता २, घाईते÷अपाङ्ग ९, शहीद २४ र विस्थापित २० जना रहेका छन् ।
त्यस्तै भुम्लु गाउँपालिकामा घाईते÷अपाङ्ग १, शहीद १२ र विस्थापित १ जना रहेका छन् । उक्त गाउँपालिकामा बेपत्ता हुनेहरुको संख्या छैन । चौरीदेउराली गाउँपालिकामा बेपत्ता ६, घाईते÷अपाङ्ग ११, शहीद २३ र विस्थापित २८ जना रहेका छन् । महाभारत गाउँपालिकामा घाईते÷अपाङ्ग १७, शहीद १७ र विस्थापित ६ जना रहेका छन् । बेथान्ञ्चोक गाउँपालिकामा बेपत्ता ३, घाईते÷अपाङ्ग २, शहीद ११ र विस्थापित ५ जना रहेका छन् । रोशी गाउँपालिकामा बेपत्ता ३, घाईते÷अपाङ्ग ८, शहीद २८ र विस्थापित १५ जना रहेका छन् । खानीखोला गाउँपालिकामा घाईते÷अपाङ्ग ८, शहीद २५ र विस्थापित २ जना रहेका छन् ।